Ihe ngosi oyuyo Google ohuru na egosiputa uru nnomi foto akpaka | Akụkọ akụrụngwa
Ọhụrụ foto Google ad na-egosi uru nke i automaticomi foto akpaka
Izu gara aga anyị gosipụtara gị mgbasa ozi Google na-atọ ọchị, nke ụlọ ọrụ Mountain View na-eme ihe ọchị nke obere oghere nke ụdị iPhone bụ isi, 16 GB. N'oge ọkwa ahụ ekwughị banyere iPhone, egosighi ya n'oge ọ bụla, mana UI na egosipụta ụda bụ ihe doro anya site na iOS. Mgbasa ozi na-atọ ọchị ma ị bụ onye ọrụ gam akporo ma ọ bụ ngwaọrụ Apple, ihe dị ka ha dị.
Ugbu a ụmụ okorobịa nọ na Google ewepụtala mgbasa ozi ọhụụ ọhụụ nke ọ gosipụtara ọzọ uru nke foto Google karịrị asọmpi ahụ. Ọ bụrụ na ị bụ ndị ọrụ Google Photos, n'ezie have meela ka akpaghị aka rụọ ọrụ nke mere na oge ọ bụla anyị sere foto, a na-etinye ya na igwe ojii na-akpaghị aka, nke mere na ọ bụrụ na ezuru ngwaọrụ ahụ ma ọ bụ furu efu, anyị ga-atụle foto niile anyị sere.
Na mgbasa ozi ọhụrụ ahụ, Google gosipụtara anyị ikpe ọzọ nke foto Google na akwụkwọ akpaka ya Ọ nwere ike ịzọpụta anyị ịnwụ foto niile ma ọ bụ vidiyo niile ejirila ngwaọrụ anyịNa vidiyo anyị na-ahụ otu onye ọrụ si ekpori ndụ ọdọ mmiri ma kpebie ịbanye n'ime ya. Naanị mgbe ị banyere n'ime ọdọ mmiri, ị chetara na ị nwere ngwaọrụ gị na uwe mmiri gị, yabụ o yikarịrị ka ngwaọrụ ahụ ọ ga-abaghị uru mgbe ọ na-agba mmiri ma ị gaghị enwe ike wepụ ihe oyiyi na vidiyo ị were.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ vidiyo ọzọ nke akatọla ohere nchekwa dị ala nke isi iPhone, lee ị nwere ya.
Foto Google na-enye anyị ohere ịchekwa na-enweghị njedebe ma hapụ foto ọ bụla nwere mkpebi dị ala karịa 16 mpx na vidiyo ruo 1080p. Ọ dị maka ma android ma iOS.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ọhụrụ foto Google ad na-egosi uru nke i automaticomi foto akpaka
Ndepụta nke Pokémon kachasị ike na Pokémon Go
Samsung nwere ike ịgbanwe ụzọ anyị si aghọta ụwa nke foto